Ithetha ntoni i-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Kuthetha ntoni kwi-Instagram?
Julayi 17, 2019 0 IiCententarios 2725
Abantu abaninzi ngakumbi bajoyina izigidi zabasebenzisi i-Instagram enayo. Ke ngoko iintlobo ezahlukeneyo esinokuzifumana kwesi sicelo zinxulumene neenkcubeko ezivela kwihlabathi liphela onokuzilandela kwaye zilandele emva kwakho. Kodwa mhlawumbi xa uku-injini yokukhangela igama libonakala ngezantsi komsebenzisi kwaye umbuzo uphakama ukuba kuthetha ukuba kulandelwe kwi-Instagram.
Njengemibuzo ofuna ukufumana iimpendulo kuyo, umzekelo, ukwazi ukuba ngubani okulandelayo kwaye ngubani ongayifuniyo. Kodwa ngaphambi kwalokhu sicacisa okokuqala ukungaziwa.
Umahluko phakathi kwabalandeli kwaye ulandelwe
Kulula kakhulu ukwahlula phakathi komnye, ukususela kwikota "Kulandelwe" kubhekiswa kubasebenzisi obalandelayo. Ngelixa "Abalandeli" imalunga nabasebenzisi abakulandelayo, ke uluntu lwakho lubhekisa kumlandeli wakho kunye nabasebenzisi obalandelayo, ukuba ubandakanya iiprofayili eziphindaphindwayo.
Ibonakala nini rhoqo kwi-Instagram?
Ukuba ukwinjini yokukhangela ye-Instagram kwaye ufumana umntu okanye iphepha ofuna ukuqala ukulilandela, kodwa emazantsi egama lomsebenzisi ubona "Kulandelwe" kuthetha ukuba le profayile sele iyinxalenye yazo oyilandelayo kwaye ukuba unayo njengomlandeli kwiakhawunti yakho.
Ukuba awukhumbuli uqala ukulandela loo msebenzisi okanye iphepha kwaye ufuna ukuyeka ukwenza njalo, ungazibeka kwenye yeebha ezingezantsi kwebhayiloji ethi "Ukulandela", ucinezela kuyo kwaye imenyu ishukuma oko ikutshoyo "Yeka ukulandela" Ukunqakraza kolu khetho luya kuyeka ngoko nangoko ukulandela lo mntu okanye iphepha.
Ukuqonda ukuba kuthetha ntoni rhoqo kwi-Instagram? Uninzi lwabalandeli abathembekileyo
Kubaluleke kakhulu ukuseka unxibelelwano kunye nabalandeli bakho, ukuqonda ukuba kuthetha ukuthini ukulandela u-Instagram, yiyo loo nto kucetyiswa ukuba ubhale amagqabantshintshi ngomxholo abalayishayo kwaye kunjalo enkosi kwaye uphendule kwizimvo abazenzayo kwizithuba zakho. Ngapha koko, ezi ngcebiso zibaluleke kakhulu ukuba ufuna ukufumana uluntu oluthembekileyo lwabalandeli kwaye ngakumbi xa sithetha ngeprofayili yeshishini okanye uphawu.
Kodwa ukuba iakhawunti yakho sele inamawakawaka abalandeli iya kuba nzima kakhulu ukuphendula kwizikhundla zabo bonke abalandeli bakho. Ngesi sizathu siza kukubonisa ezinye izixhobo ukuze ukwazi ukubona ukuba ngabaphi na abalandeli bakho abanyanisekileyo abasebenza ngaphakathi kwesicelo.
Kulula kakhulu ukusebenzisa usetyenziso lwe-AndroidInezinto ezininzi eziya kuba luncedo kakhulu, nangona kunjalo uninzi lwazo lufumaneka kuphela kuhlobo oluhlawulweyo.
Ngaphakathi kwesicelo ungaqaphela inqanaba apho bakho bonke abalandeli bakho, ngokubaluleka kwabo benze olona "thando" lukhulu kunye nezimvo kupapasho lwakho. Unokuphinda ulayishe ii-litas kwakhona rhoqo xa ufuna ukuhlaziya isikhundla, ngale ndlela bakuxelela ukuba zingaphi izikhundla abalandeli bakho abaziphumeleleyo okanye abalahlekileyo. Ikwanomnye umsebenzi onomdla kuwo owenza itemplate kunye neefoto zenkangeleko yabalandeli bakho abaphambili kunye nesikhundla sabo kwinqanaba, ukongeza inkcazo ngokukhankanya nganye kuzo.
Inikwe amandla kuphela kwiifowuni ezisebenzisa inkqubo ye-iOS, inemisebenzi emininzi kunangaphambili, kuba yenza iindidi ezintlanu zoluhlu ezinje:
Abona balandeli: Uluhlu olusekwe kubungakanani "bokuthandwa" kunye nezimvo ezibonisa abalandeli bakho abathembekileyo. Ikwabonelela ngombono oneenkcukacha kuba ibonisa isimbuku sempendulo kupapasho lwakho.
Abalandeli ababi: Olu luhlu luluncedo ekufumaneni ezo profiles zibubuxoki, kuba ikubonisa ongaphawuliyo okanye "othanda" umxholo owufakelayo kwisicelo.
Abasebenzisi ababalaseleyo abangakulandeli: Iqwalaselwa njengeyona nto inomdla, kuba ibonisa uluhlu lwabalandeli abanokuthi basabele kwizikhundla zakho, nangona kunjalo bengeyonxalenye yeqela labasebenzisi abakulandelayo.
Abalandeli baka-Ghost: bonisa abalandeli abangakwazanga ukwenza nayiphi na imisebenzi kwizithuba zakho ixesha elide.
Abasebenzisi be-Ghost ubalandelayo: Kuyanceda ukucoca uluhlu lwabasebenzisi obalandeleyo.
Ngezi zicelo zibini ungabazi ukuba ngoobani aba balandeli ezihlala zisabela kwizikhundla zakho, ke ngoko bakubonisa ukuba ngubani ongaphezulu kweefayile kunabanye abasebenzisi. Kodwa kubalulekile ukuba wazi ukuba ngubani omlandelayo ongakulandeliyo.
Ngubani lo undilandelayo angandilandeli? Ithetha ukuthini rhoqo kwi-Instagram
Abantu ngokubanzi bayathanda ukwazi ukuba umntu abamaziyo usenokuba uyekile ukumlandela okanye ukuba ngumntu omlandelayo nomnye Unomdla kupapasho lwakho okanye ufuna nje ukongeza umlandeli omtsha. Yiyo loo nto siza kukunika iinketho ezimbini ukuze uphume ngaphandle kwamathandabuzo, Kufuneka iqatshelwe ukuba sincoma ifom yemanyuwali ukusukela ekusebenziseni ukusilela kwezicelo zomntu wesithathu kunokwenzeka.
Indlela yesandla yokwazi ukuba kuthetha ukuthini ukulandela kwi-Instagram
Okokuqala ukwazi ukuba kuthetha ukuthini rhoqo kwi-Instagram, kuya kufuneka fumana umsebenzisi omlandelayo ku-Instagram usebenzisa injini yokukhangela, ukuba awulazi igama lememori unokuzama ukufikelela kwiprofayile yakho kwaye ucinezele kwibar ethi "Kulandelwe" kuba ilikhonkco kuluhlu lwabantu obalandelayo.
Emva kwexesha ungajonga ukuba itheyibhile ephezulu ithi "ilandelwe" ukuqinisekisa inyathelo elilandelayo. Nje ukuba ungene ngaphakathi, khetha igama lomsebenzisi ofuna ukutshekisha nalo ulandelayo. Emva koko unokuqaphela ukuba i-Instagram ayikuxeleli ukuba sele uyilandela, nangona kunjalo ungacinezela ikhonkco layo kwinani lokulandelwa kwaye ngale ndlela ubona ukuba ngaba kuluhlu lwabasebenzisi abayilandelayo.
Ungasebenzisa i-injini yokukhangela yesicelo ukuzifumana kwaye ukhangele ukuba kuluhlu lwabo, ukuba igama lakho lomsebenzisi liyavela kwiziphumo kuba umsebenzisi uyakulandela.
Sebenzisa ezinye iinkqubo
Njengoko sele sikhankanyiwe, kunzima ukwenza ukusetyenziswa komntu wesithathu kuba angabonisa iziphoso kwii-algorithms, kuba i-Instagram iyinqande kakhulu i-API yayo kangangokuba phantse akukho mntu unokukwazi ukuhlaziya idatabase. Kuya kufuneka kwakhona ukhumbule ukuba xa Usebenzisa nasiphi na isicelo, wabelana ngolwazi lwakho abanokuqokelela, sikwazi oku sikhankanya ezinye zazo ezijongwa njengezithembeke ngakumbi kunezinye.
Ukulandela: Kwiimeko ezininzi isebenze ngokuchanekileyo, kodwa hayi kwiiakhawunti ezinabalandeli abaninzi kakhulu, ngenxa yemida ye-API. Ikwafumaneka nakwi-Android kunye ne-iOS kwaye xa ivuliwe kwiselfowuni yakho kufuneka ucofe iqhosha elithi "Sayina ungene" ukuze ungene.
Kanye ngaphakathi, uza kufumana isikhangeli sakho apho ungabhala khona idatha yakho ukuba ungene ku-Instagram kwaye xa ufikelela kuyo isicelo iya kuqalisa ukuyihlalutya kwaye kuya kuthatha imizuzu embalwa ukuqokelela idatha yakho. Emva koko cinezela ukhetho "Akandilandeli Mva" kwaye bonke abasebenzisi abangakulandeliyo baya kuvela, ukuba ucofa naliphi na amagama abo abasebenzisi isicelo siza kuvula inkangeleko yomntu kwaye siyeke ukulandela ukuba yiyo le nto uyifunayo.
Uzohlulahlula njani ezo profiles zibubuxoki?
Ngaphakathi kwe-Instagram kukho iiprofayili ezinobuthi okanye ezinganikeli galelo kwi-akhawunti yakho. Ngale ngqondo ilungile ukuba uyazi ukuba uzichonge njani ukuze ungabakhathaleli xa bekulandela, njenge: abo basebenzisi abafuna ukulandelwa ngabo kuphela, abantu abaneefayile ezingezizo okanye abangena nge-1 kanye ngenyanga, abasebenzisi abakulandelayo kodwa bangaphenduli nakweyiphi na iposti yakho.
Ngakolunye uhlangothi, oko kuthetha kaninzi kwi-Instagram kukwabakho ukuba omnye umsebenzisi ukulandela kodwa akakunikanga intliziyo kwaye uphawule kancinci kwizithuba zakho, Kungenxa yokuba umxholo wakho awunamdla, ufuna wena ukuba umlandele. Ngendlela efanayo unokubachonga ngokulula ngokubona inani labalandeli kunye nenani labantu abamlandelayo.
Iiprofayili eziyinyani ezilandela kwi-Instagram
Zama ukungaze ulandele umntu ungakhange umbone kwaye ufundele iprofayile yakhe, ngalo nto sithetha ukujonga iifoto zabo, inani leefoto ezifakiweyo, el ixesha onalo ngaphandle kokulayisha umxholo, igama lakhe, inani labalandeli, inani labantu abalandelayo kwaye ukuba uphawula ukuba uphawula ukuba kukho into engalunganga, unokuyityeshela.
Musa ukuqhubeka, oku kuthetha ukulandela kwi-Instagram
Okokugqibela, ukuba kuthetha ukuthini rhoqo kwi-Instagram lukhetho lokulandela umsebenzisi luya kuhlala lungolwakho, ngoko ke musa ukulandela nabani na ukumlandela nje, Kulumkele ukulandela iakhawunti engenamdla kuwe. Ngapha koko, kungcono xa uqala ukulandela abantu abalayisha umxholo ofana nowakho, ngale ndlela uya kuziva ukhululekile ngezithuba zabo kwaye lo mlandeli omtsha uya kusabela rhoqo kumxholo owubekayo.
Kuhlala kulungile ukuba nabaphulaphuli abalungileyo onokuthembela kubo ukuba ufumane "ukuthandwa" kunye nezimvo. Akunabalandeli ekufuneka bekhona, ekugqibeleni i-Instagram ikunika i ithuba lokudala indawo yabahlobo kwaye kuya kufuneka uthathe ithuba.
1 Umahluko phakathi kwabalandeli kwaye ulandelwe
1.1 Ibonakala nini rhoqo kwi-Instagram?
2 Ukuqonda ukuba kuthetha ntoni rhoqo kwi-Instagram? Uninzi lwabalandeli abathembekileyo
2.1 I-InstaFollow ye-Instagram
3 Ngubani lo undilandelayo angandilandeli? Ithetha ukuthini rhoqo kwi-Instagram
3.1 Indlela yesandla yokwazi ukuba kuthetha ukuthini ukulandela kwi-Instagram
3.2 Sebenzisa ezinye iinkqubo
4 Uzohlulahlula njani ezo profiles zibubuxoki?
4.1 Ziba iiakhawunti
4.2 Iiprofayili eziyinyani ezilandela kwi-Instagram
4.3 Musa ukuqhubeka, oku kuthetha ukulandela kwi-Instagram
Julayi 17, 2019
Uza kususa nini ukuthanda?